Global Voices teny Malagasy » Libia: Vehivavy, Mpanoratra, Mpanakanto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Mey 2009 3:17 GMT 1	 · Mpanoratra Fozia Mohamed Nandika avylavitra
Sokajy: Libia, Fampandrosoana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Vehivavy sy Miralenta
Raha ny fahitàna azy hatreto dia mbola tsy mahakasika ny tontolon’ny fitorahana blaogy libiana ny gripan-kisoa fa mino aho fa ny firesahana ny momba ny anjara toeran’ny vehivavy dia efa famakiana lay kosa.
Taorian’ny fitrandrahana blaogy libianina maro,
Highlander izay mandefa lahatsoratra momba ireo mpanoratra sy mpitoraka blaogy arabo/libiana dia mihevitra fa raha hanoratra ihany dia aleo mampiasa ny tontolon’ny blaogy ho fanazaran-tena. Tsy ilaina akory ny manao resa-be amin’ny olon-drehetra, mba hisorohana ny disadisa amin’ny andaniny lehilahy.
“Raha ny hevitro dia tsy manohitra velively izay nosoratan’ireo anabaviny, reniny, vadiny sns… akory ny lehilahy Libianina fa ny olana dia mitoetra ao amin’ny tsindrim-piaraha-monina ary ny 3ayb [ ny henatra– ny fahafaham-baraka] - tsy mampihontsina izay hitan’ny maso fa toy ny tsy misy…na ao amin'ny hoe mety hiaka-danja ny vadin'izy ireo ary mety hadika vilana ny heviny na hoe, à Dieu ne plaise, mety hanimba ny laza amam-boninahiny noho ireo lehilahy mandoto ny tranonkalany/blaoginy. [ref ]
Endrika matetika adino ny hoe tsy antoka mihitsy momba ny fihevitra samihafa na mitovy mikasika io resaka io ny fandehanana miaina ivelan’i Libya. Jereo izay nitranga tamina hetsika mitovy amin’io tany Londona sy Washington DC. nanatrika iray tany Londona i Anglo Libyan, izay nahasorena ka mangataka ny lehilahy izy mba hanaja ny vehivavy.
““Raha iny izaho mandehandeha tao anaty trano fandraisam-bahiny iny dia nahita maro tamin’ireo olona nahazo fanasàna mijorojoro eny ivelan’ny efitrano natokana handefasana ny horonantsary noho ny varavarana rehetra efa nihidy rahateo, nahamarika vehivavy vitsivitsy aho teo, nijoro niaraka tamin’ireo mpanaraka azy, 20 minitra teo ho eo taorian’izay dia hitako ny mpikambana iray tamin’ny mpikarakara nanokatra ny varavaran’ny efitrano hitanilanila ary tampoka teo tsy haiko hoe avy taiza fa nahita andiam-behivavy Libiana aho, manodidina ny 15 na 20 teo nihazakazaka avy any aorianay ary niditra tany anaty efitrano, toy ny tselatra marina mihitsy, avy eo ilay mpikambana avy amin’ireo mpikarakara dia nanidy ny varavarana, raha ny tsikaritra dia niafina tsy ho hitan’ny mason’ny olona tany ananonanona tany ry zareo mandra-pisian’ny olona niteny tamin’ireo mpikarakara mba hamoha varavarana azy ireo hialan’izy ireo amin’ny fiandrandrana fitserana avy amin’ny mason-dehilahy Libiana !!!! Taorian’ny nisokafan’ireo varavarana hidiran’ny sisa taminay hiditra hanatrika ny hetsika tao anaty efitrano, ny zavatra voalohany voamariko dia ny fipetrahan’ireo vehivavy rehetra tery amin’ny farany indrindra ary manao vondrona iray amin’ny toerana navàhana, tonga dia nijery avy hatrany ireo vehivavy vitsivitsy hitako tery ampiandohana niara-nitsangana tamin’ireo mpanaraka azy aho, toa gaga sy sorena izy ireo, azoko antoka fa te-hiaraka hipetraka amin’ireo fianakaviany ry zareo saingy nanapa-kevitra ny hiavaka amin’ny fianakaviana ka nipetraka niaraka tamin’ireo vehivavy hafa ary dia hita mihitsy fa tena tsy faly.” [source ]
Namoaka lahatsoratra iray somary niteraka adihevitra mafana mikasika ireo vehivavy vahiny nanambady Libianina ary tsy voakarakara araka ny tokony ho izy ny On the edge. Hoy izy:
” Mamaky tsy tapaka aho izay lazain’ireo mpitoraka blaogy libianina manoratra miresaka ny HAMORAN’ny fiainako vahiny manambady libianina, mipetraka aty Libia. […] Ny zavatra azoko ambara dia ity …. Tena faran’izay mafy ny fiainanay. Mafy marina, mafy lavitra noho izay azonareo eritreretina. Tsy toy ny vehivavy Libiana manana reny na ray mba hiaro anay izahay rehefa manapa-kevitra ny hanao tsinontsinona anay ny vadinay sy/na ny fianakaviany. Tsy mahita idodododoana sy lavaka isitrihana koa izahay rehefa sarotra sy ratsy ny raharaha. Tsy misy toerana haleha na iza hitarainana, hihaino anay sy ny olana sedrainay. Tsy misy tànana hanampy mba hivatsy fitiavana, toy izay azon’ny vehivavy Libiana. Tsia, mizàka ny zava-mitranga fotsiny izahay. Miaina amin’izany. Tsy mitsoaka izahay. Mitraka hatrany izahay ary miady ho an’ny tenanay sy ireo zanakay, tsy andalanay izay fitaovana na fomba entinay miaro tena.
Ataonay izany noho ny Fitiavana. Fitiavana, eny Fitiavana. Tianay ny vadinay, na dia indraindray aza irianay mihitsy ny hanapitra ny ainy. Tianay ireo zanakay, na dia tsy mankato anay sy menatra noho izahay tsy Libiana aza, satria hafa izahay. Eny, izany no mihatra amin’ny sasany aminay. Amin’ny fitiavana ny ankohonana nekenay, i Libia sy ireo mponiny, tanàna sy ireo zavatra rehetra toa kidaladala, hafahafa, mahafinaritra sy mahagaga ao aminy.”
Tsy ilaina akory ny milaza ny hafanàn’ny resaka manodidina ity lohahevitra ity izay fenoin’ity lahatsoratra iray ity .
Amin’ny lafiny iray sy amin’ireo lohahevitr’ireo mpanoratra Libiana, tsy mitsahatra ny manao izay mahazendana antsika amin’ny fandikàny ireo tantara fohy avy amin’ireo mpanoratra Libiana (lahy sy vavy) i Ghazi avy amin’ny Imtidad. Mpanoratra iray voatanisa sy eritreretiko fa mànana hoavy tsara sy mamiratra i Ghazi. HNy fandikan-teny farany nataony dia ny ” While drinking tea”  an’i Omar Kikli [”Eo ampisotroana dite”], izay mampatahotra ahy.
Shahrazad , izay mahita foana zavatra mahaliana avy any Libia dia nampakatra sary maromaro nalaina avy amina hosodoko nataona vehivavy Libiana iray mpanao taokanto manana ny hoaviny. 
” Ireto misy sary hosodoko vitsivitsy nalain’ny anabaviko tany an-tranon’ny namany. Vao eo amin’ny fanombohany mihitsy ilay mpanao taokanto ary tsy mbola nampiranty mihitsy. Noho izany, nilaza taminy aho fa navoakako tamin’ny blaogiko ireo sary hosodokony ary ho hita eo hoe manao ahoana ny akony”
Ahy manokana, vidiako ny iray amin’ireo hosodokony raha mahavita mikarakara fampirantiana izy.
Ho faranako amin’ny famoahana ny lahatsoratr’i Lostdubliner , vehivavy iray teratany irlande monina sy miasa any Libia ny resaka. Roa volana teo izay no efa nahatany an-toerana azy.
“Miaraka amin’ny fakantsary efa vonona, niala tao amin’ny efi-tranon’ny hotely aho nanantena ny hahazo ampahan-tsary kely mikasika ny kolontsaina eto an-toerana – nihodina manodidina hevitra iray tena tsara momba ny zava-misy izy ity no nivadika ho zava-mahaketraka. Azo lazaina fa isak’izay fiara tamy manatona ka lehilahy no ao anatiny dia mampaneno kipantsona na mijanona mihitsy. Maro ny tolotra voaraiko ho fanaterana ahy amin’ny fiara, laharana telefona ary fanasana hiditra anaty fikambanam-pirahalahiana! Sorena sy tezitra, teny antenantenan-dàlana aho no nitodi-doha malaky nanao tongotra an-katoka niverina avy hatrany tany amin’ny hotely.[…] Nony tonga tany amin’ny hotely, tena tsara fanahy sy mahay mandray olona tsara tokoa ireo mpiasa ao, hain’ny tsirairay rahateo ny anarako na antsoiny hoe “ranabavy”. Amin’ny ankapobeny, mbola mahay mifandray aman’olona mihoatra noho ny Tandrefana ry zareo libiana – maneho fahatsaram-po lalim-paka sy fahatsaram-panahy tena mahatony tokoa! [loharano ]
Ity eto ambany ity dia manaporofo fa vendrana ny zatovolahy Libiana sasany ary ny hafa kosa anefa dia tena gentlemen be fitiavana.
Tiavina ny vehivavy eo amin’ny fiaraha-monina Libianina, hajaina ary raisina toy ny reny, anabavy, nenitoa, zanakavavy ary vady. Ny fanjakàna no miantoka ny fahalalahana sy ny fitovian-jon’ny lahy sy ny vavy, nefa mbola midona amin’ny fomban-drazana sy ireo kolontsaina, ary eto dia marihiko fa tsy miresaka finoana aho. Tsy misy fanindrahindrana ny vehivavy na kely aza ity lahatsoratra ity, fa fanamarihana fotsiny ihany ireo zavatra tsy mety sy mikiky ny fiaraha-monintsika ary tari-kevitra ho amin’ny fitadiavam-bahaolana momba azy ireny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/20/2287/
 lahatsoratra iray ity: http://on-the-edge-of-something.blogspot.com/2009/03/and-another-thing-or-2.html
 HNy fandikan-teny farany nataony dia ny ” While drinking tea”: http://imtidad.blogspot.com/2009/03/while-drinking-tea.html
 hosodoko nataona vehivavy Libiana iray mpanao taokanto manana ny hoaviny.: http://shahrazadsblahs.blogspot.com/2009/04/update.html